Displaying 21-30 of 740 results.
सप्तरी गोलीकाण्डका मृतकलाई सहिद घोषणा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ : माओवादी केन्द्र
काठमाडौं, १० चैत । नेकपा माओवादीको केन्द्रीय बैठकले सप्तरी घटनामा मृत्यु भएका परिवारलाई सहिद घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिनसमेत माग गरेको छ ।
बिहीबार समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बसेको माओवादी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण टोलीमा छोरा प्रकाश र पत्नी सीता पनि
काठमाडौं, १० चैत । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बोआओ फोरममा भाग लिन आजै चीन भ्रमणमा निस्कदैछन् । उनको सचिवालयका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज राति चीनको हाइनान प्रान्तको बोआओ सहरतर्फ प्रस्थान गर्ने लागेका हुन् ।
कुनै एजेण्डा र सम्झौता विना हुन ला
नयाँ शक्तिको तरार्इ कार्यक्रममा जनलहर, बर्दिबासमा कार्यक्रम जारी
महोत्तरी १० चैत । नयाँ शक्ति नेपालले आयोजना गरेको हिमाल–पहाड–तराई र मधेस अभियानमा सर्बसाधारणको उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिएको छ । सिराहाको लाहानबाट बुधवार शुरु अभियान अन्तरगत बिहीवार महोत्तरीको बर्दिबासमा आयोजित कार्यक्रममा पनि करिब १० हजा.. .. ..
चीनबाट फर्केपछि मोर्चाका माग सम्बोधन गर्छु : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं, १० चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको समसामयिक परिस्थिति, स्थानीय निकायको निर्वाचन, संसद्को चालु अधिवेशन र चीन भ्रमणबारे संसदीय दललाई जानकारी गराएका छन् ।
सिंहदरवारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार बसेको ब
नेपाल आउँदै भारतका गुगल ‘ब्वाइ’ बालक कौटिल्य
काठमाडौं, १० चैत । अद्भूत क्षमताका धनी भारतमा गुगल ब्वाइ भनेर चिनिने कौटिल्य पंडित बिहिबार ९आज० नेपाल आउने भएका छन् । हाइल्यान्ड इन्टरटेन्टमेन्टले उनलाई नेपाल ल्याउन लागेको हो । उनले शनिबार राजधानीको सभागृहमा आफ्नो प्रतिभा देखाउने छन् ।
विप्लवका नाममा एमाले कार्यकर्ताले चन्दा असुली गरिरहेको खुलासा
काठमाडौं, १० चैत । नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले विप्लवको नाम लिदैं चन्दा असुली गरिरहेका खुलासा भएको छ ।
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को नामबाट एमाले अखिलका कार्यकर्ताले चन्दा असुली गरिरहेको बेला बुधबार पक्राउ प
मधेसको लहानबाट सुरु नयाँ शक्तिको अभियानमा उर्लियो जनसागर (हेर्नुस् १० तस्विर)
- सन्तोष यादब
सिरहा, ९ चैत । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले सिरहाको लहानबाट ‘हिमाल, पहाड, तराई/मधेस राष्ट्रिय अभियान २०७३’ सुरु गरेको छ । अभियानको उद्घाटन पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरे । मधेस विरोधी पहिचान बनाएका न
सिरहाका तत्कालिन जिशिअ महतो छानवीनको घेरामा
सिरहा, ६ चैत । सिरहाका तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी महेन्द्र महतोेमाथी शिक्षा विभागले छानवीन शुरु गरेको छ । तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी महतो ६ असोज २०७२ देखि १६ असोज २०७३ सम्म सिरहामा कार्यरत रहदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै परेको उजुरी माथि शिक्षा विभागले छाबिन.. .. ..
निर्वाचन सार्न सकिने प्रचण्डका सल्लाहकार खनालको प्रस्ताव
काठमाडौं, ६ चैत । सरकारले दलहरुबीच सहमति भए चुनाव पनि सार्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल बलदेवले दलहरुबीच सहमति भएका चुनाव केहीदिन सार्न सकिने बताए । तर सहमति नर्भ संविधान संशोधन पारित न.. .. ..
मध्यमार्गी बाटो अपनाएर निर्वाचनमा भाग लिन मोर्चालाई उपप्रधानमन्त्री थापाको आग्रह
मोरङ, ६ चैत । उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी हुन मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरेका छन् ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका उनले विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अहिले सहमति हुन सक्ने विषयमा सहमति गर्ने र अरु वि